Wasiirka Isgaarsiinta DFS oo sheegey waqtiga dib loo helayo Internet Fiber Optic
MUQDISHU, Somalia- Wasiirka Isgaarsiinta Dowlada Federaalka Somalia Cabdi Cashuur ayaa sheegey in Markabkii ka shaqeyn lahaa ciladii ku yimid Internet-ka fiber Optic uu maalintii Talaadada soo gaarey halka filada kasoo leexato.
"Marka kii ciladbixin lahaa Internet Fiber Optica waxa uu soo gaarey duleedka Muqdishu maalintii Talaadada waxana la filayaa in maalinta Jimacaha uu ku soo dhowaado dekada Muqdishu" sidaas waxaa yiri wasiirka oo ka hadlayey ciladbixinta Internet.
Cabdi Cashuur aya sheegey in la filayo in maalinta Axada dib u soo noqdo adeegii Internetka isagoo sheegey in ciladu kaga jirto meel aan ka fogeyn xarunta Xalane.
Dhinaca kale Wasiirka Isgaarsiinta dowlada Federaalka Somalia ayaa beeniyey warar sheegaya in adeega Internet loo goostey deyman lagu yeeshey shirkadaha Isgaarsiinta.
Somalia: Weerar ka dhacay degmada Qoryooley
Soomaliya 17.07.2017. 14:15